image from eastasiaforum.org
ဒီပို့စ်ကိုရေးဖို့စိတ်ကူးရတာကတော့၊ တနေ့က တီဗီမှာလာသွားတဲ့ အစီအစဉ်မှာ၊ ဘယ်လိုသွားဆေးခန်းမျိုးကို ရွေးချယ်ကြမလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းလေးကြည့်ရင်း၊ စာဖတ်သူတွေကို မျှဝေချင်လို့ပါ။ ဂျပန်မှာ Convenience store ပေါင်း ၄၃၀၀၀ ကျော်ရှိပါတယ်။ သွားနဲ့ခံတွင်းဆေးခန်းအရေအတွက်က ၆၈၀၀၀ ကျော်ရှိပါတယ်။ စတိုးဆိုင်ထက်တစ်ဆခွဲလောက်ပိုများတဲ့ သွားဆေးခန်းတွေထဲက ဘယ်လိုရွေးပြီး ကိုယ့်ကျန်းမာရေးအတွက်ပြကြမလဲဆိုတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာပညာပေးအစီအစဉ်ပါ။
ပထမဆုံး ဆေးခန်းကို ၀က်ဘ်ဆိုဒ်ကနေ ကြည့်ပြီး ဘာကုသမှုတွေကို အထူးပြုပြီးလုပ်ပေးတယ်၊ ဆရာဝန်ရဲ့လုပ်သက်က ဘယ်လောက်ရှိတယ်၊ စတာတွေရှာကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
ဆေးခန်းမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့ ကုသမှုအထောက်အကူပစ္စည်းတွေကိုလည်း ကြည့်ဖို့သတိပေးသွားပါတယ်။
ပညာရပ်တိုင်းဟာ စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာနေရပါတယ်။ အချိန်နဲ့အမျှ ဆေးနဲ့ ကိရိယာအသစ်တွေ၊ ကုသမှုအသစ်တွေတွေ့ရှိနေတယ်၊ အရင်ကမှန်တယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆ ကုသမှုတွေက ခေတ်မမီတော့ဘဲ၊ ဆက်ပြီးကုသမှုနည်းလမ်းအဖြစ် မသုံးသင့်တော့တာ စတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆရာဝန်ဟာလုပ်သက်များတာနဲ့မလုံလောက်သေးပါဘူး။ Up-to-date ဖြစ်နေရပါတယ်။ စဉ်ဆက်မပြတ်ပညာဆည်းပူမှုလုပ်နေမနေ၊ သူ့ရဲ့ဆေးခန်းဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကဖြစ်စေ၊ ဆေးခန်းဧည့်ခန်း-လူနာစောင့်ခန်း စတာတွေမှာ ချိတ်ဆွဲပြထားလေ့ရှိတဲ့ ဘွဲ့-certificate-သင်တန်းတက်ရောက်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်စတာတွေ ရှိမရှိကြည့်ဖို့ကိုလည်းအကြံပေးသွားပါတယ်။
သွားနဲ့ခံတွင်းဆေးပညာဟာ၊ လူတကိုယ်လုံးမှာရှိတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေထဲက တစ်ခုမျှသာဖြစ်ပေမယ့်၊ သွားပိုးစားကုသမှု၊ သွားဖုံးရောဂါကုသမှု၊ သွားအစားထိုးကုသမှု၊ သွားမြစ်တွင်းအကြောသတ်ကုသမှု၊ သွားညှိကုသမှု၊ dental implant ကုသမှု၊ ခွဲစိတ်ကုသမှု၊ စတဲ့အထူးပြုပညာရပ်တွေအပြင်၊ ဒီတစ်ခုစီထဲမှာဘဲ ထပ်ခွဲထားတဲ့အသေးစိတ်ကုသမှုအစိတ်အပိုင်းတွေရှိတာကြောင့်၊ ကိုယ့်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရပ်ကို အထူးပြုလေ့လာထားတဲ့ဆရာဝန်နဲ့ပြသခြင်းအားဖြင့်၊ ရောဂါရဲ့သဘောသဘာဝ၊ ကုသမှုအသေးစိတ်စတာတွေကို ပိုနားလည်ကျွမ်းကျင်တဲ့အတွက် ရောဂါမြန်မြန်ပျောက်ကင်းသက်သာမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း၊ ဆွေးနွေးသွားပါတယ်။
နိုင်ငံကြီးတွေဆိုတချို့လူတွေက အထင်ကြီးလွန်ပြီး အကုန်ကောင်းမယ်ထင်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံတွေမှာလည်း ပေါက်ကရတွေလုပ်တတ်တဲ့ ဆေးခန်းတချို့ရှိနေပါတယ်။ မှားယွင်းတဲ့ကုသမှုတွေကြောင့် နစ်နာရတဲ့လူနာတွေ တခါတလေ တက္ကသိုလ်ဆေးရုံမှာ လာပြကြရတာတွေ့ရပါတယ်။ တနေ့က ခံတွင်းထဲကနေ ပြန်ထုတ်လိုက်ရတဲ့ dental implant တွေဟာ၊ သတ္တုချောင်းတွေကို သံချောင်းပုံတွေဖြစ်သလိုထွင်းပြီး လူနာသွားဖုံးရိုးထဲမှာ ဖြစ်သလိုစိုက်ထည့်ထားတဲ့ တိုင်တေနီယမ်သတ္တုချောင်းတွေဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ ဂျပန်လိုနိုင်ငံမျိုးမှာ ဒီလိုကေ့စ်မျိုးတွေ့ရလို့ တော်တော်အံ့အားသင့်မိပါတယ်။
ဂျပန်နဲ့အလားတူအမေရိကန်လိုနိုင်ငံတွေမှာလည်း၊ လူနာအချင်းချင်း ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရတာမျိုးလို အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ဆေးခန်းတွေရှိတာ သတင်းတွေထဲမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ စိတ်အချရဆုံးကတော့ တက္ကသိုလ်ဆေးရုံတွေဘဲဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံကြီးတွေမှာရောက်နေကြတဲ့မြန်မာတွေအတွက် ကျန်းမာရေးဗဟုသုတဝေမျှတာပါ။ အားလုံးရောဂါဘယကင်းဝေးကြပါစေ။
Posted by Dr. Nyan at 7:30 PM
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားအဖေနဲ့အင်းသားအမေက မွေးဖွားလာတဲ့တောင်ကြီးသား၊ ဗမာမလေးနဲ့မမျှော်လင့်ဘဲဆုံတွေ့၊ ချစ်သူတွေဖြစ်၊ အိမ်ထောင်ကျပြီး သမီးလေးတစ်ယောက်မွေးထားတယ်။ မြန်မာပြည်မှာကျောင်းဆရာလုပ်တယ်။ကုသရေး၊သင်ကြားရေးနဲ့သုတေသနတွေလုပ်နေတယ်။
ပုခုံးနှစ်ဘက်ကြားခေါင်းပေါက်တဲ့လူချင်းအတူတူ ကိုယ့်နိုင်ငံကလူတွေကိုလည်း သူများတွေလို ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးသုခတွေ၊ လွတ်လပ်ခြင်းအရသာတွေကို ခံစားရစေချင်တယ်။
If there isawill, there is alwaysaway.
Don't do anything what you don't want to be done.
Dental Galvanism - ခံတွင်းထဲက လျှပ်စစ်ဓာတ်
Halitosis သို့မဟုတ် ခံတွင်းနံ့ပြဿနာ
Recurrent aphthous ulcers သို့မဟုတ် ဒုက္ခပေးတဲ့အနာလေးတွေ
Referred pain သို့မဟုတ် ရောဂါတခြား-အနာတခြား
သွားပိုးစားရောဂါကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ chewing gums
သွားလေးတွေသန့်ရှင်းဖို့..Dental floss သုံးကြစို့...
အလှအပရဲ့လျို့ဝှက်ချက်များ - မျက်နှာအလှ
အလှအပရဲ့လျို့ဝှက်ချက်များ - လှပတဲ့အပြုံး
Visitors since 14/9/2008
ကျန်းမာရေး (38) အထွေထွေဗဟုသုတ (6) အတွေ့အကြုံလေးများ (5) ကိုယ်ပိုင်ခံစားမှု (2) dental implants (1) favourite song (1) ပညာရေး (1) ဘလော့(ခ်)တစ်ခုမွေးဖွားခြင်း (1) မိသားစုရေးရာ (1) လူမှုရေး (1) သွားနဲ့ခံတွင်းကျန်းမာရေး (1) အစားအသောက် (1)
Learning Kanji (Chinese charters) used in Japan
English for all (English podcast for listening)